SMEX:Fandrahonana ho an’ny zo ankihy ny fisian’Israely ao amin’ny Expo Dubai 2020 · Global Voices teny Malagasy
Hirika volamena ho an'ireo orinasam-panaraha-maso ny fandraisan'Israely anjara
Voadika ny 16 Desambra 2021 4:27 GMT
Nandray anjara tamin'ny Fampiratian'i Dubai i Israely izay hita fa ahafahany mivarotra ny teknolojiany momba ny fanaraha-maso izay efa nanimba ireo mpanao gazety sy mpikatroka any Afovoany Atsinanana. Sary nampiasaina araka ny CC BY-SA 3.0
Navoakan'ny SMEX voalohany tamin'ny 6 Desambra 2021 ity lahatsoratra ity. Naverina navoaka izany ho ampahany amin'ny fifanarahana famoahana indray miaraka amin'ny Global Voices.
Nanokana ny tranohevany tao amin'ny Expo Dubai 2020 i Israely tamin'ny 7 Oktobra 2021, rehefa nandefa ny fanasany an'i Israely handray anjara tamin'ny tsena iraisampirenena naharitra enim-bolana tamin'ny taona 2019 ny Emira Arabo Mitambatra (UAE), herintaona talohan'ny nanaovany sonia ny fifanarahana Abraham.
Mpitsidika tombanana ho 25 tapitrisa no andrasana hitsidika ny Ranty (Expo), izay manomboka ny 1 Oktobra 2021 ka hatramin'ny 31 Marsa 2022, ary heverina ho hirika ho an'i Israely, iray amin'ireo firenena feno manara-maso mandroso indrindra manerantany, hanatsara endrika ny tenany eo anoloan'ireo mpitsidika maneran-tany — hetsika fanentanana amin'ny anaran'ny UAE.
Hanokatra ny vavahadiny tsy ho ela ny Expo any Dubai. Tsy misy rindrina na sisintany ny trano heva Israeliana, mampiseho ny fisokafana, ny fahasamihafàna ary ny zava-baovaon'i Israely – hirika ho an'ireo mpitsidika an-tapitrisany avy any Afovoany Atsinanana sy any an-dafy hankanesana any #Israel & ho avy.
Nametraka andiana drôna Israeliana , izay nomen'ny orinasa Israeliana mpanangona lahatahiry avy any an-habakabaka Airobotics ny polisy Dubai, mba hivezivezy mandritra ny fampirantiana ho fiarovana izany. Nandritra izany fotoana izany, nanambara ny fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny polisy Israeliana ny polisy mba hiadiana amin'ireo “tambajotran-jiolahy” ao UAE, araka ny tatitry ny The Telegraph.
Efa nanomboka tamin'ny taona 2007 fara fahakeliny ny varotra teknolojian'ny fanaraha-maso eo amin'ny roa tonta, rehefa nanasonia fifanarahana mitentina $816m tamin'ny orinasam-piarovana ankihy AGT an'ny Israeliana ny manampahefana ao Abu Dhabi, mba “hiaro ny fotodrafitrasa tena ilaina rehetra ao anatin'ny emiràn'i Abu Dhabi”, araka ny tatitra nataon'ny ny Middle East Eye. Nifanaiky ny AGT sy ireo orinasa mpiara-miombon'antoka ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra — Advanced Integrated Solutions sy ny Advanced Technical Solutions — fa hamolavola hetsika fanaraha-maso manerana ny Emiraty amin'ny sarany $600m tamin'ny Febroary 2011. Fantatra amin'ny anarana hoe “Masom-boromahery” (Falcon Eye), natomboka tamin'ny volana Jolay 2016 ny hetsika, ka fakantsary an'arivony no napetraka teny amin'ny lalana, fotodrafitrasa, tranobe ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena.
Tao anatin'ny fiarahamiasa vao haingana, nanambara fifanarahana iraisana hamolavola andian-tsambo miaramila avo lenta sy tsy misy mpivoy izay afaka miasa amin'ny fomba mahaleotena amin'ny ampahany (semi) na manontolo ny firenena roa tonta . Raha jerena ny fampiasam-bola goavana ataon'ireo firenena roa tonta amin'ny sy ao anatin'ny teknolojian'ny fanaraha-maso, sy ny tantara iraisan'izy ireo momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ​​dia manohintohina mafy ny tsiambaratelo ankihy sy ny fiarovana ny olom-pirenena Emirà Arabo Mitambatra ary ny faritra miteny Arabo amin'ny ankapobeny ny firongatry ny fiarovana ara-tafika ataon'izy ireo, .
Nampiseho ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny 7amleh — Foibe Arabo ho an'ny Fampandrosoana ny Media Sosialy fa nitombo be tao Jerosalema Atsinanana sy ny Morontsiraka Andrefana ny fakantsary fanarahamaso sy ny fanaraha-maso ankihy taorian'ny fanafihana mahery vaika tamin'ny fibodoana nahazo ny Palestiniana tamin'ny volana Avrily sy Mey 2021.
“Loza mitatao tsy ho an'ny Palestiniana ihany […] fa ho an'ny olom-pirenena ao amin'ny Helodrano manontolo, amin'ireo rindrambaiko mpitsikilo Israeliana namidy tamin'ny didy jadona manerana ny tontolo Arabo ny fanomezana ny fitaovam-piarovana Israeliana hotantanin'ny tsy miankina, sy ny firoborobon'ny orinasa tsy miankina naorin'ireo (miaramila) taloha sy mpitsikilon'ny Mossad taloha, ,” hoy ny fampitandreman'i Madawi Al-Raheed, profesora Saodiana-Britanika izay nokendren'ny rindrambaiko mpitsikilo Israeliana Pegasus ny findainy tamin'ny taona 2019.
Voalaza fa mivarotra rindrambaiko mpitsikilo amin'ny Emira Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Maraoka ary Bahrain ny Candiru sy ny Vondrona NSO, samy orinasa Israeliana amin'ny sehatra fanarahamaso, ka mahatonga ny sehatry ny fanarahamaso Israely ho loza mitatao ho an'ny fiainan'ny mpanao gazety sy mpikatroka miasa any amin'ny faritra Arabo sy any ivelany. Tany am-piandohan'ny volana lasa teo, Nampiditra anaty lisitra mainty ny Vondrona NSO sy Candiru ny Departemantan'ny Varotra Amerikana ka “mametra ny fanondranana, ny fanondranana indray ary ny famindrana entana an-tanindrazana” ataon'ireo orinasa ireo. Na dia afaka mametra ny asan'izy ireo aza ny fampidirana azy ireo ao amin'ny lisitra (mainty) voalahatr'i Etazonia, dia azo inoana fa hanohy hiasa amin'ny anarana hafa ny NSO sy Candiru.
Tamin'ny volana oktobra, hita fa nampiasa ny rindrambaiko mpitsikilo Pegasus ny mpitondra Emirà Arabo Mitambatra, Sheikh Mohammed mba hijirika ny findain'ny vadiny taloha, izay nitarika ny fampitsaharana ny fifanarahany tamin'ny vondrona Israeliana NSO. Efa nampiasa rindrambaiko mba hidirana amin'ny findain'ireo mpanao gazety, mpikatroka, mpisolovava ary mpanohitra, ao anatin'ny Emiraty sy any ivelany ny Emirà Arabo Mitambatra taloha. Nanambara ny fanadihadiana nataon'ny Forbidden Stories fa anisan'ireo lasibatra nojirihana tamim-pahombiazana ireo mpikatroka Emirati malaza Ahmed Mansoor sy Alaa Al-Siddiq.
Milaza ny lahatsary fampiroboroboana ny Tranoheva Israeliana fa hirika volamena ho an'ny firenena roa tonta hanamafisana ny fifamatorana izany, sady mitady marimaritra iraisana ankoatra ny tsy fitovizan'izy ireo. Natao hampiroboroboana ny fikasana feno fihatsarambelatsihy amin'ny fibodoan'ny Israeliana amin'ny “tsy misy rindrina sy tsy misy sisintany” ny tena endriky ny sehatra. Mifanohitra tanteraka amin'ny “Rindrina Manasaraka” tsy azo hidirana mirefy 708 km izay natombok'i Israely naorina tamin'ny taona 2002, ary namakivaky ny faritany Palestiniana. Mirehareha izany ho toy ny “[efa misokatra] tanteraka..izay ahitanao ny faravodilanitra hatramin'ny farany ka hatrany amin'ny farany” ny Kaomisera jeneralin'ny tranoheva Israely, filazana izay mahagaga manoloana ny fampihorohoroana an'i Palestina “hatramin'ny reniranony ka hatrany amin'ny ranomasina.”
Ho setrin'ny fandraisan'Israely anjara tamin'io hetsika io, nanavao ny antsony hanao ankivy ny tranoheva Israeliana ao amin'ny Expo ny Hetsika BDS. “Samy mampiasa tsy an-kenatra ny World Expo ny Emira Arabo Mitambatra sy Israely amin'ny fampisehoana ‘endrika tsara tarehy kokoa’ hanadiovana sy hanodinana ny saina amin'ny fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona ataon'izy ireo,” hoy ny Komity Nasionalin'ny BDS Palestiniana tao anaty fanambarana iray.
Hampiantrano ny Fampiratiana Manerantany eto Dubai ny fitondrana UAE amin'ny volana Oktobra. Samy hampiasa izany ny fitondrana sy ny Isiraely mpanavakavaka mba hanadiovana sy hampanara-dalàna ny heloka an'ady vitan'ny tsirairay avy.
Miantso ny governemanta, orinasa ary mpanakanto izahay hanao ankivy ity hetsika ity #BoycottDubaiExpo ➡️ https://t.co/Bmec1vlGCj
Mandrisika ny mpitsidika rehetra mba hanao tahaka izany ny SMEX
Tiorkia 11 ora izay
Tiorkia 14 ora izay